Umboniso kaJon Stewart weApple TV + ukwenza inkulumbuso ekwindla | Ndisuka mac
Umboniso kaJon Stewart weApple TV + ukubonisa inkulumbuso ekwindla
Ngo-Okthobha ophelileyo, uThe Hollywood Reporter wabhengeza Ukubuyela kukaJon Stewart kumabonwakude Bambisene neApple TV + emva kokuthatha umhlala-phantsi kwi2015 emva kokuba lilizwi lokuhlekisa kwezopolitiko eMelika kwiComedy Central ngaphezulu kweminyaka engama-20.
NgoFebruwari ophelileyo, kwawona magumbi eendaba athi ukubuyela kukaJon Stewart kwilizwe likamabonwakude sele kune Iqela lokuyila elenziwe ngabasetyhini aba-3: UBrinda Adhikari, u-Chelsea Devantez kunye noLorrie Baranek. Ngoku Ngu-Apple uqobo oye wabhengeza igama lomboniso kunye nokuba uza kuqala nini.
Ukubuyela kukaJon Stewart kumabonwakude kuya kuba ekwindla yalo nyaka, ngelixa isihloko senkqubo siza kuthi, xa kungekho kuguqulelwa kwiSpanish, Ingxaki noJon Stewart. Ukusuka kwaApple bayaqinisekisa ukuba le yeyokuqala kwezinye ezininzi eziza kuvela ezandleni zalo msasazi kunye nentatheli.
Ingxaki kaJon Stewart iya kuba ngumboniso malunga iya kujongana nemicimbi yangoku ngefomathi yeyure enye kunye nesihloko esinye apho izihloko ezikulezo zimvo zishushu phakathi koluntu ziya kujongwa.
Ukongeza kwinkqubo yeApple TV +, kolu luhlu lukwanalo iya kuba ne-podcast yayo ehambelanayo, apho isihloko esichazwe kwisiqendu esihambelanayo siya kuphinda sihlolwe. Ngokumalunga nexesha lokuqhubeka kolu ngcelele lutsha, ekuqaleni bekukho amahemuhemu okuba ayizukuba ngeveki okanye ngenyanga, kodwa iya kusekelwa namhlanje ngokungafaniyo nemiboniso ka-Oprah Winfrey.
Kuyo yonke iminyaka engama-20 njengokubonisa kwiComedy Central, UStewart uphumelele ama-Emmy Awards angama-20, Impumelelo aza kuzama ukuyiphinda ekubuyeni kwakhe kwilizwe likamabonwakude ngeApple TV +.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Umboniso kaJon Stewart weApple TV + ukubonisa inkulumbuso ekwindla
Amandla eSilicon azisa ihabhu ezisixhenxe
I-Readdle's "yonke-in-nye" Amaxwebhu app afumaneka kwiApple Silicon